vr Archives - SmartMe
Archives tag: vr
Dom » Entries tagged with "vr"
Huawei dia miasa amin'ny mpanara-maso ny lalao VR
Vao nambara fa Huawei dia nametraka patanty ho an'ny mpanara-maso lalao mifanaraka amin'ny headset virtoaly virtoaly. Toa tsy ho ela ny mpanamboatra sinoa dia te-hanakorontana be amin'ny fivoarana tsy tapaka ...
Lalao VR VR? HTC VIVEPORT dia miditra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny BANDAI NAMCO
Bandai Namco, HTC, Namco, vr
VIVEPORT, sehatry ny serivisy famandrihana HTC ary fivarotana app VR, dia nanambara fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny BANDAI NAMCO Pictures (BN Pictures), studio sary mihetsika sy sary mihetsika horonantsary malaza, hitondra ireo sary mihetsika malaza ...
HTC Vive Cosmos sy Vive Cosmos ELITE mora kokoa anio ihany!
solomaso fiarovana, Vr solomaso, HTC, vive cosmos, vr
Raha misy fampiroboroboana tsara dia mila milaza momba azy ireo ianao;) Raha niandry fotoana mety ianao hividianana solomaso VR dia tonga. HTC solomaso 600 PLN mora vidy kokoa! Marina ny vakianao, ny fampiroboroboana an'i HTC dia misy ...
Ny nanovan'ny zava-misy virtoaly ny indostrian'ny fiara
Ao amin'ny indostrian'ny fiara, ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny teknolojia vaovao dia singa iray mahomby amin'ny tsenan'ny fifaninanana mihombo, izay mitaky fandefasana vokatra haingana sy vokatra avo lenta kokoa. Androany, ny vahaolana VR dia efa ...
Oculus Quest 2 miaraka amin'ny famelombelona 120Hz?
6 Martsa 2021
Oculus, oculus quest 2, vr
Toa ny vera Oculus Quest 2 augmented zava-misy no hahazo fanohanana amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz amin'ity volana ity. Ny hetsika toy izany dia nasehon'ny iray tamin'ireo solontenan'ny Facebook. Nanomboka tamin'ny volana oktobra lasa teo ny fitaovana ...
HTC Vive Cosmos - Fotoana famerenana horonantsary VR!
20 Febroary 2021
HTC, HTC Vive Cosmos, virtoaly zava-misy, viva, vr
Ity ny fanadihadihana headset VR voalohany! Androany izahay dia mizaha toetra ny HTC Vive Cosmos ho anao! Tsy napetraka tonga lafatra izy io, fa azo antoka fa manana tombony be dia be! Karazana inona? Ho hitanao amin'ny sarimihetsika izy ireo!
Goggles adala amin'ny VR Cosmos, na HTC Vive Cosmos famerenana
11 Febroary 2021
Vr solomaso, HTC, HTC Vive Cosmos, virtoaly zava-misy, vr, zava-misy virtoaly
Miverina amin'ny tontolon'ny zava-misy virtoaly indray isika! Tamin'ity indray mitoraka ity, ny iray amin'ireo maodely malaza indrindra amin'ny vera VR dia nandalo ny fitsapana ady. Miresaka momba ny HTC Vive Cosmos aho. Aza misalasala mandinika. Ry mpamaky malala, ity lahatsoratra ity dia fitohizan'ny andiany VR ...
Fivoahana bebe kokoa momba ny headset Apple VR
5 Febroary 2021
paoma, paoma vr, vr
Fantatray hatry ny ela fa Apple dia miasa amin'ny famindrana setroka ho an'ny zava-misy virtoaly, ka izany no tsy mahagaga raha be ny fivoahana. Ny farany amin'izy ireo dia milaza fa hasiana fampisehoana misy vahaolana 8K ...
Vaovao ao Viveport - mampiofana toa ny mahatsara azy miaraka amin'ny simulator soccer soccer Rezzil Player 21
28 Janoary 2021
HTC VIVE®, mpitarika ny zava-misy virtoaly (VR) premium, dia nanangana simulator soccer soccer Rezzil Player 21 tao amin'ny Viveport.com. Ankehitriny ianao dia afaka manatsara ny fahaizanao amin'ny baolina kitra ao an-trano noho ny teknolojia fanahafana matihanina ...
Hey tadidio inona ilay VR? Virtual zava-misy tamin'ny 2021
27 Janoary 2021
mitombo ny zava-misy, zava-misy artifisialy, virtoaly zava-misy, vr
Marina indrindra. Tadidinao ve ny atao hoe VR? Zava-misy virtoaly? Solomaso 3D? Hadinoko kely sahady, fa vao haingana aho dia nahavita naka kopian'ny vera VR - fampandrenesana spoiler: ho avy tsy ho ela ny famerenana! Tamin'ireto solomaso ireto, namelombelona ...
Xiaomi dia mampatsiahy momba ny faran'ny famarotana mialoha ny maodely Mi 11 Lite 5G
shutterBox - Jamba marani-tsaina avy any BleBox
Xiaomi dia manomana mpandimby ny Mi Note 10